चीन बुनाई मिसिन दाँत बेल्ट निर्माण र कारखाना मोर्टन मेशीनरी
बुनाई मिसिन दाँत बेल्ट
के तपाईं उच्च शक्ति बुनाई मिसिन दाँत बेल्ट खोज्नुहुन्छ?
त्यसोभए तपाईं सही ठाउँमा आउनुहुनेछ।
तपाईं यहाँ उच्च शक्ति र पहिरनयोग्य बुनाई मेशिन बेल्ट पाउन सक्नुहुन्छ।
कार्य मूल्य: अमेरिकी डलर २..5.। प्रति मिटर
न्यूनतम अर्डर मात्रा: १० मिटर
आपूर्ति क्षमता: Year 35००० पीसी प्रति वर्ष
गोलाकार बुनाई मेसिनको लागि 1. उत्कृष्ट गुणवत्ता बेल्टहरू।
२. कुनै आवाज, एन्टि-सैटिक, तेल प्रतिरोध, ताप-प्रतिरोध।
कपडा गोलाकार बुनाई मेसिनको लागि उच्च क्षमता विशेष बेल्ट।
मोर्टन टाइमिंग बेल्ट अनौंठो सिमलेस लूप बेल्ट टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर, उच्च-शक्ति केभलर कोरसँग कडा टेन्सिल शक्ति, उच्च थकान प्रतिरोध गुणांक र कुनै स्ट्रेचिंग घटना छैन।
सबै आयात गरिएको पोलीरेथेन कच्चा माल बेल्टको उच्च पोशाक प्रतिरोध सुनिश्चित गर्नका लागि चयन गरिन्छ, कम आवाज र मर्मत-मुक्त।
मोर्टन टुथ बेल्टमा उच्च एन्टि-वेयर क्षमता, उच्च-स्पीड अपरेशन स्थिरता, र लामो जीवन हुन्छ। यो वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, र खाद्य उद्योगमा गोलाकार बुनाई मशीनरीका लागि उपयुक्त छ। उत्पाद अझै पनी उच्च लोड प्रसारण मा राम्रो संचालन क्षमता राख्छ। यसले रिंग जडानलाई समर्थन गर्दछ र कुनै पनि लम्बाइमा जडान गर्न सकिन्छ।
समय बेल्टको काम गर्ने सिद्धान्त:
समय बेल्ट ड्राइव एक अन्तहीन बेल्ट बाट बनेको छ भित्र भित्री परिधि सतह मा भित्री दाँत र सम्बन्धित दाँत संग एक चरखी। अपरेशनको बेला, बेल्ट दाँत गति र शक्ति प्रसारित गर्न पुलीको दाँत ग्रूभसँग जाल गर्दछ। ट्रान्समिशन र चेन ड्राइभ गियर ट्रान्समिशनको लाभको साथ एक नयाँ प्रकारको बेल्ट ड्राइव।
टाइम बेल्ट र समय चक्रको स्थापना र प्रयोगको लागि सावधानी:
चरखीको केन्द्र दूरी कम गर्नुहोस्। यदि त्यहाँ टेन्सनर छ भने, यसलाई पहिला सुस्त बनाउनुपर्दछ, र त्यसपछि बेल्ट स्थापना पछि केन्द्र दूरी समायोजित गर्नुहोस्। स्थिर केन्द्र दूरीको साथ प्रसारणको लागि, पुलीलाई पहिले हटाउनुपर्नेछ, र त्यसपछि बेल्ट चरखीमा स्थापना हुन्छ, र त्यसपछि यसलाई सुधार्नको लागि लुगा शाफ्टमा स्थापना गरिन्छ।
अघिल्लो: बुनाई मेसिन भण्डारण फिडर
अर्को: लुब्रिकेशन सिस्टम
चीनमा सर्वश्रेष्ठ समय बेल्टहरू
उत्कृष्ट गुणवत्ता बेल्ट
उच्च शक्ति टेक बेल्ट
बुनाई मिसिन समय बेल्ट
लामो जीवन बेल्ट फैक्टरी